Cages Dog tsara indrindra - Tombony, karazana ary izay rehetra tokony ho fantatra | Tontolo alika
Na dia miresaka momba ny priori aza tranom-borona ho an'ny alika Izy io dia mety hahatonga antsika hametraka ny tanantsika eo an-dohantsika, ho hitanao fa mety ho iray amin'ireo singa tonga lafatra indrindra izy io ary tian'ireo volontsika volom-borona koa. Noho izany, tonga ny fotoana handaozana ireo finoana sarotra sasany mba hitrandrahana tsara indrindra amin'izay atolotray ho antsika.
Ireo tranom-borona matetika dia malalaka, na dia ho hitanao aza fa misy ny habe sy ny toerana rehetra. Ho fanampin'ny zava-misy fa izy ireo dia misy andiana bara sy izany tsy hataontsika sazy mihitsy izy ireo, fa amin'ny maha singa iray hafa afaka manampy ny biby fiompintsika, tsy mino an'izany ve ianao? Tokony ho hitanao izany.
1 Karazana tranom-borona alika
1.1 Ary mbola hanohon
1.2 ivelan'ny trano
1.3 Ho an'ny alika lehibe
1.4 Ho an'ny alika antonony
1.5 Ho an'ny alika kely
1.6 Ho an'ny vatan'ny fiara
2 Ahoana no ahafantarako hoe iza no tranom-borona mety amin'ny alika?
3 Ahoana ny fampiasana ny tranon'ny alika?
4 Tombontsoa amin'ny fananana tranom-borona
5 Mendrika ve ny mividy tranom-alika?
6 Aiza no hividianana tranom-alika
Karazana tranom-borona alika
Cage FEANDREA ho an'ny ...
TecTake 800515 - Cage...
Ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra hisafidianana ireo tranom-borona alika dia ity. Modely mivalona izy io, izay asehon'ny anarany dia izany Azontsika atao ny manangona sy mitahiry azy nefa tsy maka habaka. Izy io dia mety amin'ny toerana kely indrindra nefa koa afaka mitondra ny sezan'ny fiara. Tokony holazaina fa afaka mahita azy ireo mihidy tanteraka isika na, toy ny zaridaina ary misokatra eo an-tampony. Satria araka ny natoronay azy dia tsy maintsy mieritreritra foana momba ny fampiasana izay homentsika azy isika.
Ho an'ny ivelany, dia marina fa izay mahasamihafa azy ireo dia matetika ny habeny. Satria angamba amin'ity tranga ity dia tsy manana olana amin'ny habakabaka mety hitranga ao an-trano intsony isika. Etsy ankilany, izy ireo koa dia azo atao amin'ny lafiny rehetra na mamela ny faritra ambony amin'ny tranom-borona toy ny valan-javaboary. Marina fa ny vy indray no maherifo, fa amin'ity tranga ity dia afaka mahita maodely vita amin'ny hazo ihany koa isika.
Ho an'ny alika lehibe
Ny hevitra dia ny alika mahazo aina ao aminy. Ka raha manana alika lehibe ianao dia tsy maintsy misafidy ny iray amin'ireo cages antsoina hoe XXL. Ao anatin'izy ireo dia afaka manana famaranana isan-karazany amin'ny endrika fitaovana ianao, ka tsy hanana olana amin'ny fisafidianana izay mifanaraka aminao indrindra. Nefa tadidio fa tsy maintsy malalaka izy ireo.
Ho an'ny alika antonony
Nobility - Cage Metal ...
Ny fandrefesana ny volontsika dia iray amin'ireo dingana tsy maintsy raisintsika alohan'ny manomboka mieritreritra karazana cages alika inona no ilaintsika. Miorina amin'ny haben'ny habeny dia ho hitantsika ireo tranom-borona ho an'ny biby salantsalany, izay, araka ny anarany, dia hanana toerana ampy hipetrahana sy hijoroana, noho izany ny vokatra dia tokony hanana toerana malalaka.
Ho an'ny alika kely
Ny karazany kely kokoa dia mety saika na aiza na aiza. Ka ny cages kely kokoa no ho safidy tsara indrindra ary tsy ny an'ny vita amin'ny metaly ihany fa ny an'ny lamba koa. Eny, amin'ity tranga ity dia mety ho entin'ny lamba hafa toa izao ianao na angamba amin'ny plastika. Izy ireo dia toy ny mahatohitra ihany koa ary ho fanampin'izany, izy ireo dia hanatanteraka ny asan'ny fiarovana ny biby fiompintsika, izay no ilaintsika.
Ho an'ny vatan'ny fiara
Tsy misy fisalasalana fa safidy tsara ny mieritreritra ireo tranom-borona miforitra. Ary koa Raha mampiasa azy io fotsiny ianao amin'ny fitondrana azy amin'ny fiara dia ho kely ny habaka rehefa tsy ampiasainao. Miankina amin'ny haben'ny biby fiompinao, azonao atao ihany koa ny misafidy ny famaranana metaly, miaraka amin'ny kodiarana ary koa ny hidim-baravarankely azo antoka amin'ny varavarana. Cages plastika koa mety tsara ho an'ny fiara na fiaramanidina.
Ahoana no ahafantarako hoe iza no tranom-borona mety amin'ny alika?
Tokony hataontsika mazava tsara fa ny vala dia ho toerana azo antoka ho azy, izay hitondra fiononana ho azy. Ka noho io voalaza io dia mila malalaka sy lava ny halavany mba hivoahan'izy ireo ao anaty sy hahatsapa ho tsara ao an-trano. Mba hahitana izany sakan'ny sy ny habeny mety io dia tsy maintsy refesintsika ny alika hatramin'ny orony ka hatrany aoriany.. Izany hoe, ny halavany manontolo ary manomboka amin'io refy io dia efa fantatsika izay karazana tranom-borona tokony hovidintsika.
Hamarino tsara fa rehefa mifoha izy dia tsy mikasika ny baran'ny tranom-borona. Noho izany, mifototra amin'ny fandrefesana azy dia tsy maintsy mamela santimetatra vitsivitsy fanampiny isika rehefa misafidy ny tranony. Firy? Eny, manodidina ny 10 santimetatra eo ho eo, eo ho eo.
Ahoana ny fampiasana ny tranon'ny alika?
Raha vantany vao azontsika ny tranom-borona miaraka amin'ny fandrefesana tonga lafatra, dia hapetrakay ao an-tranontsika izany. Ery, Tsy maintsy hofafantsika izany mba hahafahan'ny biby fiompintsika mahatsapa izany ao anatin'ny fiainany sy ny tranony. Noho izany, tsy misy toy ny fametrahana ondana izay azonao andriana. Azonao atao ny mametraka karazana vatomamy ao anatiny, ary isaky ny mandeha izy dia arahaba arahaba izy. Tokony homarihiny fa toerana azo antoka ho azy izy io fa tsy toerana fanasaziana, na eo aza ny bara.
Etsy ankilany, tsara kokoa ny tsy manosika azy mafy hiditra ao. Noho izany dia tsara foana ny mahita ireo fotoana izay tony kokoa ilay biby. Ny tsara indrindra dia ny manao azy miandalana ary noho izany antony izany, ny andro voalohany dia tsara kokoa ny tsy hijanona ela ao anaty tranom-borona, fa kosa hampitombo tsikelikely ny fotoana ary hanidy ny varavarana mihitsy aza. Tokony hahatsapa anao foana eo anilanao izy, aza mania lavitra ary izany no antony maha-zava-dehibe ny fikolokoloana na ny feon'ny feontsika mba hahatonga azy hahatsapa izany. Sorohy ny famoahana azy amin'ny fotoana mahamety azy fotsiny, mba tsy ho zatra ny hoe raha mimenomenona dia mihazakazaka manafaka azy isika.
Tombontsoa amin'ny fananana tranom-borona
Ho lasa toerana azo antoka anao io: Rehefa manana ny kidoro, ny vatomamy ary ny kilalaony aza izy dia lasa fialofana ho azy. Noho io antony io dia mazàna aorian'ny fotoan-tsarotra sasany, toy ny aretina, dia mizotra mankany amin'ireo tranomaizina izy ireo satria ho azy ireo dia toerana azo antoka ipetrahany izy ireo. Noho izany, tsara foana ny manao asa isan'andro mba hanandrana 'hanatsara' ity toerana ity.
Sorohy ny adin-tsaina sy ny fanahiana rehefa mandeha any amin'ny toerana hafa isika: Araka ny efa nahazatra azy ireo, rehefa mandeha amin'ny toerana hafa dia heverin'izy ireo ho fonenany izany ary mahatonga azy ireo ho tony kokoa sy tsy misy fihenjanana. Ka tsy ho tsikaritr'izy ireo be ilay fiovana ary ho tsara kokoa ny alika.
Ny fialofanao aorian'ny fandidiana na fananana alika kely tonga ny fotoana fitsaharana. Araka ny efa nolazainay, io no toerana azo antoka ivoahanao mahazo angovo.
Alika kely hianarana izay tsy hanamaivanana ny tenany: Izy io dia ampiasaina ho singa fampiofanana ary hitantsika amin'ny dingana rehetra. Aza adino fa matetika ny alika dia tsy manamaivana ny tenany ao an-tranonao na izay fatoriany. Noho izany, io dia fomba fampianarana azy ireo ny fahalalam-pomba.
Mendrika ve ny mividy tranom-alika?
Eny ny valiny. Satria, araka ny hitantsika dia mampiseho tombony bebe kokoa noho ny fatiantoka izy ireo.. Na dia mahita aza ny ambiny amintsika fa ny tranom-borona dia somary mitovy hevitra amin'ny fonja, ho azy ireo dia tsy ho be loatra izany. Marina fa tsy maintsy zatra azy ireo izy ireo ary maharitra ela kokoa ny sasany, fa ho avy kosa ny fotoana hahitan'izy ireo azy ho fialofana rehefa mila fiatoana amin'ny zavatra hafa rehetra izy ireo. Noho izany dia hanana ny toerany manokana izy ireo raha mbola mila izany. Ka rehefa tsy maintsy mandeha isika dia ho mora kokoa ihany koa. Ka angamba, izy ireo dia antony lehibe kokoa noho ny filokana amin'ny alika amina alika. Tsy mieritreritra ve ianao?
Aiza no hividianana tranom-alika
Amazon: Ao amin'ny Amazon dia manana ianao fifantina hevitra amin'ny endrika tranom-borona alika izay tsy azonao adino. Ny antony dia satria manana karazana habe rehetra ianao, ary koa tolo-kevitra ary na dia modely amidy indrindra aza, ahafahanao manamarina ny zava-bitany noho ny hevitr'ireo mpampiasa. Samy misy amin'ny endrika mahitsizoro sy boribory no ho hita ao amin'ny katalaoginao.
kiwiko: Ao Kiwoko dia miloka amin'ny hevitra fototra indrindra toy ny tranom-borona vy koa izy ireo. Mazava ho azy fa natao mahatohitra izy ireo ary koa manana habe samihafa mba hahafahan'ny biby fiompintsika rehetra mahazo aina. Tena mifaninana ny vidin'izy ireo Ary ity dia zavatra iray izay tsy maintsy raisintsika ihany koa rehefa mividy vokatra toy izao.
Efa nampiasaina: Rehefa te-hamonjy paompy tsara isika, afaka manao sary amin'ny pejy toa an'io isika. Satria vokatra izay tsy mampaninona antsika ny mividy efa ampiasaina. Fa eny, tsy maintsy ataontsika antoka fa habe tsara izy io ary ny varavarana na ny fanidiana azy ireo dia ao anatin'ny toe-piainana mety tsara ihany koa.
Matetika: Ireo tranomaizina fitaterana, misy kodiarana sy mivalona no ho mpiorina amin'ny fanangonana an'i Tghanimal. Ity dia tranonkala iray hafa izay tsy azontsika lavina, satria manana vokatra avo lenta foana ho an'ny biby fiompintsika isika. Tsy adino fa manana famaranana isan-karazany ihany koa izy ireo amin'ny lafiny endrika na habe, miaraka amin'ny fahafaha-manao malalaka. Ho lany ny tranom-borona alikao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Cages ho an'ny alika
Ny shampoos tsara indrindra ho an'ny alika: iza amin'ireo no safidiana isaky ny karazany